amachibi Okudada | Eyedwarha 2021
Isikhokelo kuyilo lwesoftware yoyilo kubandakanya iinkqubo zasimahla nezihlawulelwayo. Yenza uyilo lwamachibi okudada kunye nenye yezi nkqubo zesoftware.
Isikhokelo sokuyilwa kwedesika yeCantilever kunye nokuba yintoni, iintlobo zokulwa kunye nemiphetho. Jonga ukuba ukumelana nephuli yecantilever yeyona nto ilungileyo kuyilo lwakho lwedama.
Isikhokelo sokuyilwa kwedesika yokubonisa iphuli edityanisiweyo ngokubhekisele kwinto eyiyo, ngokulungileyo kunye nangobubi, iindleko kunye nokufumana iingcebiso kwakhona. Jonga ukuba indawo ekuhlalwa kuyo echibini ilungile.
Isikhokelo sokuyilwa kwedreyim emarmore kunye nobubi kunye neengozi kunye neentlobo ezithandwayo zezitayile zemarble. Jonga ukuba i-marble pool decking ilungele eyadini yakho.
Amanzi etyuwa vs iiChlorine Pools Pros and Cons
Amanzi etyuwa vs iiphuli zechlorine pros kunye nebubi ngokwahluka kweendleko, ukufakwa kunye nokugcinwa. Jonga ukuba iklorini okanye ichibi lamanzi anetyuwa lelona lifanelekileyo.
Ingca eyenziweyo engqonge Pool (Isikhokelo seDisk Turf)
Ingca eyenziweyo ejikeleze isikhokelo samachibi kunye nokuba yintoni, ukulunga kunye nokubi, iimveliso eziphezulu zokusebenzisa kunye neyona mibuzo ithandwayo malunga nengca engeyiyo.
Iingcamango zoyilo lweephuli zamatye endalo ngombala, indleko kunye neentlobo ezithandwayo ezinje ngelitye lekalika, itravertine, ilitye leflegi, imabhile, iqokobhe kunye nelitye lentlabathi.
Isikhokelo kubungakanani bemigangatho eshushu ebanzi kubandakanya ubungakanani bezinto ezincinci, eziphakathi kunye ezinkulu. Jonga ukuba yeyiphi ubungakanani beshushu eshushu efanelekileyo ekhayeni lakho.
Iindidi zamachibi okuGqiba (Isikhokelo soYilo)
Iindidi zamachibi ezigqityiweyo zityatyekwe, iithayile, ukuhlanganiswa ngokubanzi, ilitye, ilitye kunye nekhonkrithi. Bona elona phuli lilungileyo lokugqibela eligqibezela ikhaya lakho.
Isikhokelo kubungakanani beephuli zokudada ezibandakanya ubungakanani bendawo engqonge umhlaba, ngentla komhlaba, ithanga, ukuntywila, uyilo lweephuli ezinemilo engapheliyo
Isikhokelo sokuyilwa kwedesika yokuboniswa komdibaniso ocacileyo kunye nokuba yintoni, ukulunga kunye nokubi, iindleko kunye nokuphinda wenze iingcebiso. Jonga ukuba indawo ekuhlalwa kuyo echibini ilungile.
Igalari yoyilo lweephuli zokuqubha ezinomhlaba ongaphezulu, ngaphezulu komhlaba, amachibi angenasiphelo kunye neempawu zamanzi. Jonga amachibi amangalisayo anamhlanje kwaye ufumane izimvo zakho ..
Iingcamango ezingama-30 zocingo lokubiya (Imifanekiso yoyilo)
Fumana iimbono zocingo ezingama-30 zokuyila amakhaya. Iingcingo zokubhukuda zibonelela ngokhuseleko kunye nokhuseleko. Iingcingo zamachibi zenziwe ngetsimbi, i-vinyl, iinkuni, iglasi kunye ..
Amachibi okuqubha angama-37 (Iimpawu zoYilo lweMpophoma)
Igalari yeempawu zamanzi okudada. Iindidi zamanzi ezidumileyo ziingxangxasi, imithombo, amakhasethi, iingxangxasi, iindonga zamanzi kunye neendlela zokuchitheka.
Imibono yePhuli yePhuli yoMlambo ongasemva
Igalari yeengcamango zamachibi omlaza emva kwendlu kubandakanya ezona mpawu zintle zamanzi, iindleko kunye noyilo. Jonga imifanekiso yamachibi okubhukuda omlambo angasemva.
Uyilo lweephuli ezingama-50
Imifanekiso Emihle yamachibi - Iingcamango ezingama-65 zePatio yoyilo -Izimvo ezingama-50 zeDeski yoyilo-Iimbono zangaphandle zoMlilo woMlilo - iiYilo ezingama-35 zeGazebo - Amachibi anezixhobo zaManzi
I-29 yeLagoon yokuDada yoyilo
Igalari yezona zixhobo zihamba kakuhle zamachibi okubhukuda Jonga iindlela ezahlukeneyo zamachibi echibini, iimpawu zamanzi, kwaye ufumane imibono yokudala i-oasis yakho yangasemva kwephupha.
Iiflethi zasebukhosini zasebukhosini zomtshato
Kufuneka ulinde ixesha elingakanani ukuphakamisa?
I-inbal dror yokunxiba komtshato